News - A n'ichepụta usoro nke FIBC akpa akpa esịtidem ihicha igwe
Modeldị ihe eji arụ ọrụ bụ nke akụrụngwa akụrụngwa, ọkachasị igwe nhicha dị n'ime, ọkachasị na akpa FIBC akpa akpa nhicha.
Ejiri ụdị ihe eji eme ihe bara uru na nke ahụ: ngwaọrụ ikuku bụ ihe ofufe, ma fanyere ya n'isi ya site na mgbado ụkwụ ya.
Ejiri igwe nhicha dị n'ime akpa akpa ihe na nke ahụ: a na-enye igbe igbe ahụ igbe mkpuchi mkpuchi dị elu maka akara, a na-enye ahụ igbe igbe ahụ ụzọ maka adịghị ọcha na-ada, ala nke ọwa ahụ na-enye efere na-enweghị atụ. nke ochoro idozi, ma meputa uzo di na etiti ifufe, na edoziri nnocha nzacha maka nzacha ahihia na adighi ocha n'okpuru uzo ahu, eji nkpuchi ugha iji duzie ikuku na ihe ojoo na nzacha. ihuenyo Ọwa ahụ na-esi na mpempe akwụkwọ mkpuchi dị n'elu wee gbasaa site na igbe ahụ bụ isi, na njedebe elu nke ọwa ahụ na-enye bọket na-eduzi ndụdụ maka ịduzi adịghị ọcha. Ejikọtara onye ofufe ahụ na ọdụ ụgbọ ala nke ọkpọkọ ikuku nke axially mere ndokwa na ọwa site na ikuku ikuku dị n'ime ya nke edoziri na igbe igbe ahụ. Portgbọ elu nke ọdụ ụgbọ elu nke ikuku nke ikuku na-agbatị site na bọket nduzi, na njedebe elu nke igbe igbe ahụ ka a na-enye bọket a na-eduzi ntụpọ dị ka oghere. Akụkụ ala jikọtara ya na ọkpọkọ ikuku ikuku edozi n'okpuru isi.